Nhau - Ungagadzirise Sei Hydraulic Cylinder
Iyo hydraulic cylinder, muchokwadi, chikamu chakakosha chemuchina wemuchina. Inofanira kusangana nezvinodiwa zvekukanda, kurova, nzvimbo yekumisikidza uye saizi yekumisikidza yemidziyo yese. Yakakosha compact dhizaini yekuvaka michini, iyo humburumbira muganho wakasimba kwazvo.
Mushure mekutarisa iko kukweva (kudhonza simba), kurohwa, kumhanya nekumisikidza modhi yemafuta, yakatarwa kumanikidza uye kuyerera kweiyo huru pombi yemafuta, kumanikidza nekusunda kwesirinda yemafuta zvakatemwa, uye hupamhi hwemukati mafuta humburumbira akatsunga. Iyo yekumhanyisa uye yemukati dhayamita yemafuta humburumbira inoona kuyerera kwehuwandu hwemafuta pombi.
Kana iwe uchiziva iyo yepakati dhayamita, kushanda kumanikidza, kurohwa uye kubatanidza maitiro eiyo humburumbira yemafuta, unogona kusarudza mhando. Kune zviyero zvepasirese zvemafuta esirinda, uye modhi inowanzo shandiswa inonzi standard cylinder.
Semuenzaniso, Zvinoenderana nekukanda kwematani mana, zvinogona kuverengerwa kuti kana Bai kumanikidza kwesilinda yemafuta yakagadzirirwa kuva 8Mpa, iyo yepakati dhayamita yemafuta esirivha iri makumi masere, uye modhi yesirinda yemafuta iri 80 * 40 * 300-8mpa. Iyo tsvimbo yemhando cylinder inogona kushandiswa nemutengo wakaderera uye nyore kugadzirisa.Kana iyo yekumanikidza yekushanda yeiyo humburumbira yemafuta iri 16MPa, iyo yepakati dhayamita yeiri humburumbira yemafuta ndeye 60, uye iyo modhi yesirinda yemafuta iri 60 * 35 * 300-16mpa , uye iyo mhando yekumonera kana yekudhonza tsvimbo yerudzi inogona kushandiswa.Iyo inokurudzirwa kuti iwe ubatanidze iyo sisitimu kumanikidza kweanogadzira michina kuona iko kushanda kumanikidza kwemafuta cylinder kutanga. Kana iyo michina michina yapera, iyo sisitimu yekumanikidza inofanira kunge yakadzikira, kazhinji iri pasi pe5MPa. Kana iyo michina michina isina kugadzikana, iyo sisitimu yekumanikidza inofanira kunge iri yepamusoro
Nekudaro, zviyero zveyirinda yemafuta zvakawandisa uye zvisina kurongeka, kusanganisira zviyero zvemunyika, zviyero zveMinistry yeMachina, uye akasiyana maindasitiri zviyero. Iyo cylinder barrel, kuvhara, kubatana uye nzira dzekuyedza dzesilinda yemafuta vane zviyero zvavo. Nzira yakanakisa ndeyekupa kudhirowa kufekitori.